Boky faharoan' i Samoela - Wikipedia
Boky faharoan' i Samoela
(tonga teto avy amin'ny Boky faharoan'i Samoela)
Ny Boky faharoan' i Samoela dia boky hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly sy ao amin’ny Tanakh, boky masin’ny Jiosy. Mitantara ny momba an’i Davida, mpanjaka israelita izay isan’ireo malaza indrindra, ny boky. Resahin'io boky io koa na ny heriny sy ny fahendreny, na ny fahalemeny sy ny fahotany ary ny vokatr’izany rehetra izany.
Tsy mety ampiononina i Davida noho ny nahafatesan'i Absaloma, Baiboly misy sary nataon'i Gustave Doré, 1866.
Ambarany fa na dia tsy fanaperana aza ny toetr’i Davida dia tsy niala amin’Andriamanitra sady tsy nidera afa-tsy i Iahveh.
1 Ny boky sy ny nanoratana azy
1.2 Ny nanasarahana ny Bokin’i Samoela
2 Fizarana ny boky
2.1 Mpanjaka sy mpitari-tafika i Davida
2.2 Ireo olana samihafa nosedrain'i Davida
2.3 Ny olana hafa momba ny fanjakan’i Davida
3 Ireo olona sy vahoaka resahina matetika ao amin'ilay boky
3.1 Olona resahina matetika ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela
3.2 Vahoaka sy firenena resahina matetika ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela
3.2.1 Ny Filistina
3.2.2 Ny Amonita
3.2.3 I Jodà
Ny boky sy ny nanoratana azyHanova
Araka ny lovantsofina dia i Gada sy i Natana no nanoratra ny boky. Ny mpikarona momba ny Baiboly anefa dia milaza fa olona maro no nanoratra sady tsy tamin’ny fotoana mitohy iray fa tanatin’ny taonjato roa (faha-6 sy faha-5 tal. J.K.). Ny fotoana tantarainy dia ny fotoana nanjakan’i Davida.
Ny nanasarahana ny Bokin’i SamoelaHanova
Tapany faharoa amin’ny boky izay atao fotsiny hoe Bokin’i Samoela (heb. Sefer Shamuel), ao amin’ny Tanakh io boky io. Ny dikan-tenin’ny Baiboly jiosy amin'ny teny grika atao hoe Septoaginta (na Septanta) no nanao izany fizaràna an’io boky io ho roa satria ho lava loatra raha mbola nitambatra anaty horonam-boky iray. Ny tapany voalohany dia atao hoe Boky voalohan'i Samoela.
Septoaginta sy Volgata Baiboly hebreo Baiboly kristiana ankehitriny
Boky voalohan'ny Fanjakana
Boky faharoan'ny Fanjakana
Boky fahatelon'ny Fanjakana
Boky fahefatry ny Fanjakana
Fizarana ny bokyHanova
Azo zaraina telo ny boky :
Mpanjaka sy mpitari-tafika i DavidaHanova
Ity fizaràna voalohany ity dia voafaritry ny toko voalohany hatramin’ny faha-12.
I Davida sy i Batseba, nataon'i Mei, Bernardino
Niakatra teo amin’ny fitondrana i Davida ka maro ny fandresena azony tamin’ny ady nifanaovany tamin’ireo firenena fahavalon’ny Israelita. Nanenjika azy ahatrany i Saoly nefa maty tan'ady namono tena tamin'ny farany. Nalahelo i Davida raha nandre ny nahafatesan’i Saoly sy i Jonatana. Nohosorina ho mpanjaka tany Hebrona izy. Ny niakaran'i Davida hisolo an'i Saoly dia niteraka ady teo amin'ny tafik'i Davida, mpanjakan'i Joda, sy ny an'i Abnera sy i Isboseta, zanak'i Saoly, mpanjakan'ny fanjakana any avaratra, atao hoe Israely. Rehefa resy ry Abnera sy i Isboseta dia nakamban’i Davida ho fanjakana iray i Israely sy i Joda. Nalain’i Davida tamin’i Jebosita resiny an’ady i Jerosalema ka nataony renivohitra. Niady tamin’ny Filistina koa i Davida ka naharesy azy. Napetrany tao Jerosalema ny Fiaran'ny Fanekena taty aoriana. Nisy koa ny fanafihana ny Amonita ka nandritra ny ady dia nanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra i Davida, izay tsy nankany an'ady, tamin’ny nijangajangany tamin’ny vadin’i Oria miaramilany izay nalefany ho faty tany am-bava ady. Niteraka olana maro nandritra ny fitondran’i Davida izany fahotany izany.
Ireo olana samihafa nosedrain'i DavidaHanova
Ny fizaràna faharoa dia mahafaoka ny toko faha-13 hatramin’ny faha-20. Nanao an-keriny ny anabaviny, atao hoe Tamara, i Amnona zanakalahin’i Davida ka novonoin’ny rahalahiny. Nanao paika ratsy sy nikomy tamin-drainy ary nitondra tafika manokana i Absaloma, zanak’i Davida, mba hakany ny fitondrana ka nahatonga ny mpanjaka handositra. Resin’i Davida ny tafik’i Absaloma. Matin-doza tsy nampoizina i Absaloma ka nalahelo mafy azy i Davida. Niatrika ady an-trano maro i Davida. Tafaverina tao Jerosalema izy rehefa resiny ireo fahavalony.
Ny olana hafa momba ny fanjakan’i DavidaHanova
Ny fizaràna fahatelo dia manomboka amin’ny toko faha-21 hatramin’ny faha-24. Ity fizaràna ity dia mitantara ny nisian'ny mosary. Nisy ihany koa ny ady tamin’ny Filistina sy ny ny areti-mandringana. Ity fizaràna ity no ahitana ny salamo nataon’i Davida sy ny fara-hafany.
Ireo olona sy vahoaka resahina matetika ao amin'ilay bokyHanova
Olona resahina matetika ao amin'ny Boky faharoan'i SamoelaHanova
I Davida dia mpajakan'i Israely teraka tokony ho tamin'ny taona 1040 tal. J.K. ary maty tamin'ny taona 970 tal.J.K. tao Jerosalema. I Jese no rainy. Ny vadiny dia i Batseba (na Betsabe) sy i Abigaila sy i Egla sy i Maka sy i Ahinoama sy i Hagita ary i Abitala. Ny zanany dia i Solomona sy i Absaloma sy i Kileaba sy i Tamara sy i Natana sy i Adonia sy i Amnona sy i Jibara ary i Jerimota.
I Natàna dia iray amin'ireo mpaminany tao amin'ny lapan'i Davida. Nanakiana an'i Davida izy tamin'ny nakan'i Davida vady an'i Batseba (na Betsabe) vadin'ilay miaramilany hitita (na heteana), dia i Oria, sy ny nanaovany izay hahafaty an'ity tompom-bady ity. Niteraka korontana anatiny izany fahotan'i Davida izany.
I Saoly na Saola dia mpajakan'i Israely teraka tamin'ny taona 1079 tal. J.K. ary maty tamin'ny taona 1010 tal. J.K. I Kisy no rainy. Ny vadiny dia i Ahinoama. Ny zanany dia i Jonatana sy i Mikala sy i Isboseta ary i Abinadaba.
Vahoaka sy firenena resahina matetika ao amin'ny Boky faharoan'i SamoelaHanova
Ny Filistina dia firenena tamin'ny Andro Taloha izay niorim-ponenana tamin'ny tany atsimo andrefana manamorona ny Ranomasina Mediteranea ao Kanaana. Araka ny Bokin'ny Mpitsara, ny fifindrà-monin'ny fokon'i Dana (Mpits. 18) tokony ho tamin'ny taonjato faha-11 tal. J.K. dia heverina fa vokatry ny fanosehan'ny Filistina azy ireo tao amin'ny tany saika honenany. Nandresy an'i Samsona sy i Saoly na Saola ny Filistina tamin'ny fotoanandrony. Nandresy azy ireo imbetsaka anefa ny mpanjaka Davida taty aoriana. Tamin'ny andron'i Solomona (na Salômôna), zanaka mpandimby an'i Davida, dia mety tafakambana tao amin'ny tanin'ny Israelita ny tanin'ny Filistina.
Ny Amonita dia vahoaka tao amin'ny fanjakana na firenena teo anelanelan'ny tany efitr'i Siria sy ny ony Jordana. Araka ny voalaza ao amin'ny Bokin'ny Genesisy (Gen. 19.38) dia taranak'i Bena Amy eanak'i Lota ny sady havana akaikin'ny Moabita. Niady matetika ny Israelita sy ny Amonita. Tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha-10 tal. J.K., araka ny Boky faharoan'i Samoela (2Sam. 12.26-31), dia resin'ny mpanjaka Davida ka nandevoziny ny Amonita.
Ny Fanjakan'i Jodà, araka ny Baiboly dia teo anelanelan'ny taona 931 sy 586 tal. J.K. no nisiany. Nifanefi-tany tamin'ny Fanjakan'i Samaria (na Fanjakan'i Israely) izay nifanohitra taminy. Vokatry ny fivakisan'ny Fanjakan'i Israely izay mbola nitambatra izy sy ny Fanjakan'i Samaria taorian'ny nahafatesan'i Solomona (na Salômôna).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Boky_faharoan%27_i_Samoela&oldid=1041736"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 18:11
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 18:11 ity pejy ity.